Ụzọ ụlọ ọrụ a na - akpọ n’ebe a na - akpọsa ụlọ ọrụ na - China Boegger
Unu nọ ebe a:Ụlọ > Products > Architectural Mesh > Ụdị:>Ụzọ Chainmail
Ụzọ a na - egwúỌ bụ ụdị ụgwọ a na - eme n’ahịa n’ahịa. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ihe a na - arụ ọrụ ya n’akwụkwọ ụgbọ mmiri. Ọtụtụ puku nkịtị n’otu n’otu na - achọkọta nnukwu ákwà. A na - ejikwa ákwà a na - agbanwe mgbanwe n’ụzọ dị iche iche: a na - agba mgbanwe, a na - ebusi, a na - eburu ma ọ bụ na a na - egbochi, ọ ka na - akwụsị n’enweghị ihe a na - eme. N’ụzọ nkà, ọ na - enwe ike dị ukwuu nke pụrụ ịnagide oké njọ. N’otu aka ya, ihe ndị dị mma ya dị ka ike dị elu na iguzogide nzọpụta na nchepụta na ọ na - enwe oge ozi karịrị oge karịa a na - eji, n’aka nke ọzọ, o nwere ọdịdị mara mma n’ahụ́ nke a pụrụ iji ihe dị ka mma n’ime na n’èzí, Mgbidi a na - akpọsa, agwọ windo, oriọna mma, n’agha.
CMC-01 Chainmail Curtain ụhara dị iche
LAha a na - eme ihe ndị e ji eme ihe: ákwà mmiri.
LIhe a na - eme: 304/316 a na - adịghị egwú, aluminium, akụkụ a na - akpụ ma ọ bụ akịbọn.
LỌgwụgwọ dị iche iche: a na - arịa ọkpụkpụ.
LUcha: ọlaọcha, ọlaedo, kopa ma ọ bụ ụcha. A na - enwekwa àgwà ndị ọzọ.
LỤfọdụ n’ebe a na - anọ: 0.5 mm - 2 mm.
LEbe ọkụ: mm 3 - 22 mm.
LỊntanet nke ọgụdụ: a na-ebeghị ya.
LUbi: 5 kg / m2 - 7 kg / m2
LOgbugha na elu: dị na gị.
CMC-02 a na-adụ ọlaọd na-adụ ahụ́ mkpụmkpụ.
CMC-03 Silver chainmail mụka n'ụma kọmputa.
LIke dị ukwuu: ihe ígwè ya na - eme ka a na - eme ka a ghara ịlụ ọgụ na ngwa ngwa ngwa ngwa.
LỊkwụnye n’ihe dị mfe: a na - eme mgbanwe ma na - akwụsi ike, n’agbanyeghị na a na - efekọ ma ọ bụ na - eme ihe.
LIhe àmà na - egosi: Ọbụna n’ọnụ ọnọdụ ume, ákwà ahụ ga - adị mma.
LIgbochi ọkụ: Ebe a na - egbochi ákwà n’ahụ́ dị nnọọ elu karịa ákwà.
LỊgba ifufe na ìhè:Jiri ikuku ọhụrụ n’ime ma mekwuo mmiri.
LMmiri ncha dị mkpụrụ osisi: A pụrụ iji mmiri dị mkpụrụ osisi ndị dị n’akwụkwọ a na - akpọ n’ahụ́.
LỌ dị ogologo oge: N’ịbụ ndị a na - eji ọgụgụ nzọ na n’agbanyeghị na o nweghị ihe na - egbu, ákwà mkpọtụ na - enye ogologo oge ozi.
LỌdịdị dị mma: a na - adị n’ebe dị njọ na ihe ndị dị n’ụzọ dị ukwuu.
CMC-04 chainmail ákwà nwere nnọọ mgbanwe dị n'agbụ
CMC-05 a na - akụkụ akụ̀
A pụrụ iji ákwà e ji achọ mma na nchebe. A pụrụ iji ya mee ihe dị ka:
LA na - eme mma n’ime nakwa n’èzí.
LOnye na - ekewa ekewa ma ọ bụ ịchọ mma n’azụ.
LIkpe a na - achọ.
LIhe a na - eme.
LIhe e ji eme ihe ngosi.
LMgbidi ngwa ngwa ngwa.
LNke a na - aga n’ime ha.
LỤlọ n’ebe ọkụ.
LMgbidi a na - akpọsa ya.
LỤzọ ahịa dị mma.
CMC-06 a na - akwụsị n’ebe a na - ekewa ebe a
Usoroiheomume:Dị ka anyị pụrụ ịhụ, e nwere ọtụtụ ọrụ a na - eji ya eme ihe ndị dị iche
LỤlọ ụlọ ọrụ.
LEbe e nwere ihe osisi.
LỤzọ ụlọ nri.
LTinye ákwà mmiri n’akpa plastik a kara, n’akpa plastik a na - achọ n’akwụkwọ ma ọ bụ n’akụkụ osisi dị ka ihe ndị ị chọrọ.
LIji igbe katọn ma ọ bụ akụkụ osisi ma ọ bụrụ na ị na - arịọ n’ahụ́ n’ime ma ọ bụ n’èzí n’ahụ́ n’ebe a na - arịọ n’akwụkwọ ..
N’ozuzu ya, a na - eji mkparu akpụkpọ n’ahụ́ ma ọ bụ okporo ụzọ aluminum a na - ewepụta ákwà. Aṅụ aluminium alloy wuri U track na mgba H. Ha abụọ bụ usoro mgbanwe n’ụzọ dị ukwuu nke bụ́ ezigbo ihe ngwọta maka mgbidi ndị a na - akwụsị n’ahụ́, ngwọta windo. Ndụ a na - enweghị ntị na - emekwa ka ọ dị mfe ịkpọgharị n’ụzọ dị mfe, ikike n’iburu ya zuru okè, karịsịa kwesịrị ekwesị maka ákwà ogologo na ihe arọ. Iji n’ụzọ a na - akpọ aluminium, tinye ákwà n’elu ya ma jiri egbochi ụfọdụ iji dozie ụzọ ahụ dị n’akụkụ mgbidi. Maka nnukwu osisi a na - enweghị ntị, nanị ijikọta ákwà na ya na obere ígwè, Ụfọdụ n’ahụ́ mmiri.
CMC-08 Chainmail iji ihe ose na - egosipụta.
Ochie:Ụzọ n’Ebe Ụzọ
Mwagụ̀ chainmail curtain, ring mesh curtain, architectural ring mesh,
Ụzọ n’Ụzọ n’Ebe Ọdịdị Dị Mmadụ na Mmetụta Ụdị Ọrụ A
Ụzọ a na - anọ n’ahụ́E nwere ọnụ ọgụgụ ígwè e jikọtara ọnụ. Tụnyere ọgụgụ ndị dị n'otu n'otu, usoro e jikọtara n'anya nwere pọndụs na-afọ n'ahụ́. Akwụkwọ ndị a na - eme ka ọ dịrị mfe ịnọ na - agafe.Ụz...
Olee ihe bụ́ isi a na - eji ákwà e ji akwụsị n’ahụ́?
ỤkwụỌ bụ ụdị ọhụrụ nke ihe ndị a na - achọ n’ime ihe n’ụlọ ọrụ, n’ihi otú o si mgbanwe dị iche iche na ọkụkụ nke wire ígwè na aṅụ, ọ na - azụkwa ụzọ dị iche iche nke ịchọ mma n’oge a. Àgwà nke ákwà mm...
Chainmail nhọrọ ụcha okwu
Otu n’ime ihe ndị mere anyị ga - eji họrọ ụchaỤzọ a na - anọBụ ịkọta ya dị ka ụcha mgbidi, ya bụ, ịhọrọ ụcha nke dị n’otu ụgwọ ma ọ bụ nanị mgbanwe n’ìhè na ịdị ọcha. Dị ka ihe atụ, a pụrụ ịkọrọ mgbid...
Ihe Ụlọ Ọnụ Na - achọ Ụlọ Ọrụ Gị na Ụlọ Ọrụ Gị
ỤkwụKpọkwaara yaỤfọdụ ụgbọ mmiri aE ji obere akụkụ nke e jikọtara ụdị "S". Ọ bụ ụdị ihe ọhụrụ a na - achọ mma. A na - eji akụ̀ n’akwụkwọ n’akụkụ ọkụ n’akwụkwọ anyị n’akwụkwọ, n’akụkụ ọkụ, ọkụ na ihe n...